चिनियाँ राष्ट्रपतिकोको भ्रमणपछि सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपिने छः डा. भट्टराई - Everest Dainik - News from Nepal
चिनियाँ राष्ट्रपतिकोको भ्रमणपछि सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपिने छः डा. भट्टराई
काठमाडौं– प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार डा. राजन भट्टराईले २३ वर्षपछि हुन लागेको चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण ऐतिहासिक हुने दाबी गरेका छन् । बुधबार रिपोर्टर्स क्लबमा यस्तो दाबी गरेका हुन् । उनले भने ,‘२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपालमा राजकीय भ्रमण हुँदैछ । चिनियाँ राष्ट्रपतिको दुई दिने भ्रमण ऐतिहासिक हुनेछ ।’
उनले भने, ‘विश्वकै दोस्रो शक्तिशाली राष्ट्र हो । चिनियाँ राष्ट्रपतिको नेपाल भ्रमण लामो समयको प्रतिक्षा थियो ।’ उनले वर्तमान सरकार निर्वाचित भएर आइसकेपछि विदेश सम्बन्ध र उच्चस्तरीय भ्रमण आदानप्रदानमा पनि निकै फड्को मारेको दाबी गरे ।
याे पनि पढ्नुस राष्ट्रपति सीको भ्रमणबाट नेपाल–चीन सम्बन्धमा नयाँ आयाम थपिने विश्वास
यसअघि नेपालका राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीले चीनको राजकीय भ्रमण गरेको र नेपालको राष्ट्रपतिको निम्तो स्वीकारेर चिनियाँ राष्ट्रपति आउन लागेको बताउँदै भट्टराईले अहिले नेपाल र चीनबीच उच्चस्रतीय संवाद निरन्तर भइरहेको स्पष्ट पारे ।
नेपाल र चीन दुवै स्वतन्त्र र सार्वभौमसत्तासम्पन्न मुलुक भएको र द्धिपक्षीय सम्बन्धमा कुनै समस्या नरहेको उनको भनाई छ । उनले भने, ‘अब झन हामीबीचको सम्बन्धको गतिमा फड्को मारिन्छ, सम्बन्धमा नयाँ अध्याय थपिनेछ ।’
याे पनि पढ्नुस ट्रम्प र सीबीच फोनवार्ता, कोरोना भाइरस नियन्त्रण हुने विश्वास
ट्याग्स: डा. राजन भट्टराई, सी चिनफिङ